मनोरञ्जन Archives – Purba Nepal
हिमशिखर डान्स आईडल सिजन २ः आगामी पौष २ गते देखी
on: In: Highlights, मनोरञ्जन
दमक/ हिमशिखर मिडिया प्रालिले हिमशिखर डान्स आइडल आयोजना गर्ने भएको छ । हिमशिखर मिडिया प्रा.लि.को आयोजनामा यही पौष २ गतेदेखि खुल्ला राष्ट्रव्यापी सिंगल, डबल र ग्रुप नृत्य प्रतियोगिता २०७५ हुने...	Read more
दमक / झापाको गौरादहमा एक दिवसीय बृहत ऐतिहाँसीक सास्कृतीक दशैँ मेला सम्पन्न भएको छ । वडा दशैँको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णीमाको दिन बिभिन्न जात जातीको सस्कृती झल्कने नृत्य देखाएर मेला सम्पन्न...	Read more
नन्दु गुरुङको ‘जमाना’ सार्वजनिक
on: In: चलचित्र, मनोरञ्जन, समसामयीक
दमक/ गायक नन्दु गुरुङको पहिलो गिती एल्वम जमानाको बिमोचन गरिएको छ । पत्रकार मञ्च दमकका बिषेश कार्यक्रमको आयोजना गरि उक्त गिती एल्बमको सार्वजनिक गरिएको हो । बिभिन्न भाकाका ८ वटा गीत समेटीएको उ...	Read more
दमकमा गुञ्जियो ‘कन्दरा’
on: In: Highlights, मनोरञ्जन, समसामयीक
दमक/ नेपाली सांगितिक क्षेत्रको चर्चित ब्याण्ड ‘कन्दरा’ले दमकमा आफ्नो देखाएको छ . दमकको सरःवती माद्यमिक बिद्यालयको प्राङ्गणमा कन्दराले आफ्नो प्रःतुती देखाएको हो . दिउँसो तिन बजे देखी कै कन्दर...	Read more
मेरो टिभि जोड्दा दमकमा अफर नै अफर, जोड्ने हैन त ?
on: In: Highlights, मनोरञ्जन, योजना, समसामयीक
दमक/ जागृती नेशनल केवल नेटवर्क दमकले मेरो टिभि जडानमा नयाँ अफर ल्याएको छ ।	Read more
दमकमा कन्दरा लाईभ कन्सर्ट हुने
दमक / झापाको दमकमा कन्दरा लाईभ कन्सर्ट हुने भएको छ । हाम्रो बाल आश्रमक निर्मणको सहयोगार्थ कन्सर्ट हुन लागेको हो । दमक २ मा रहेको हाम्रो बाल आश्रमको निर्माण तथा सञ्चालनको सहयोगार्थ कन्सर्ट गर...	Read more
दमकको पाथीभरा सहित देशका ७५ भन्दा बढि हलहरुमा ‘रामकहानी’
on: In: Highlights, चलचित्र, मनोरञ्जन, समसामयीक
दमक/ नायिका पूजा शर्मा र निर्देशक सुदर्शन थापाले मिलेर निर्माण गरेको चलचित्र ‘रामकहानी’ आगामी भदौ २२ गतेदेखी प्रदर्शन हुने भएको छ । पोखरा र काठमाडौमा मुख्य छायकंन गरिएको चलचित्र ‘फुल कमेडी’...	Read more
गर्मी भयो ? स्विमीङ खेल्न जाँउ, आजै भएको छ नयाँ स्विमिङ पुलको उद्धघाटन
दमक / झापाको दमकमा फेरी अर्को स्विमिङ पुल थपीएको छ । दमक ९ मा अवस्थित कन्काई पार्टि प्यालेसमा नयाँ स्विमिङ पुल सुरु भएको हो । कन्काई सप्लायर्स ग्रुपको दमकमा स्विमिङ पुलको सोमबार समुद्धघाटन ग...	Read more
दमकमा देखीएको तीजको रौनक हेर्नुस तस्विरमा
दमक/ झापाको दमकमा तिज बिषेश कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अखिल नेपाल महिला सघं क्षेत्रीय कमिट र हरीओम कोलेनीका महिला समुहले तिज बिषेश कार्यक्रम गरेका हुन । झापा क्षेत्र नं पाँच भरिका बिभिन्न १२...	Read more
कन्सर्टमा झुम्ने भयाे पथरी
पथरी मोरङ्गको पथरीमा दिपक वज्रचार्य सहितको रिदम व्याण्डको कन्र्सट भदौ २२मा हुने भएको छ । माउण्ट एभरेष्ट स्पोर्ट एण्ड इभेन्ट क्लवको आयोजनामा पथरी रंगशालामा हुने सो कन्र्सटमा वज्रचार्यका साथमा...	Read more